Kana Server abondera pamusana nyore simba kukundikana, kambani rose vanogona zvakanaka mitezo uye avo mashoma maminitsi mhosva outage kunogona kukonzera chakazvibata zveupfumi varasikirwa. Chikuru, e-commerce makambani kutungamirira nzira iri kutsvaka kugadzirisa dambudziko iri rinokosha: Tingaitei nechokwadi chinhu chokuvimba dziripo simba kuti haiisi pangozi guru huwandu date zvavanoda kuita basa ravo.
Ndosaka Naizvozvo, kuti chikuru dzakawanda, e-commerce makambani vanga vakabatikana ihwohwo pamwe simba remagetsi pachavo anogadza saka vanogona kuva zvashata simba nerubatsiro ucharega kuvatendera pasi chiitiko chipi zvamarudzi afoot kukundikana, pasinei kure kwakadaro Zvinogoneka angava. The simba anofanira kuramba!
The simba rudzi indasitiri yave dzakashandisa kwacho unhu hwake pamusoro zvivako izvi jenareta rinovira kuti vari zvakananga akagadzirirwa Data Centers uye vari kadikidiki sezvakatenderanwa DCP (Data Center Power) simba kuzivisa, uye kuti zvinoenderana nemitemo inodzora navo. The Uptime Institute ndiye pose vakaziva muviri kuti kutaura uye certifies kuti zvivako ane Data Center anofanira yakagadzirwa.
AGG Power vakapayona ruzivo kuramba yokugadza mitemo yepamusoro uye rakavimbika munyika yose. AGG 'Diesel emagetsi' kugona nguva-wakaedza kuzadzisa 100% mutoro agamuchirwe zvakanaka-mu-mukirasi chidhiraivho, mashoko centre vatengi vanogona kuva nechivimbo vari kutenga simba chizvarwa enyika panguva vaitungamirira kumucheto rakavimbika uye kuvimbika.